विदेशमा कोरोना का कारण १४ नेपालीको ज्यान गयो, दुई सय भन्दा बढी संक्रमण । कहाँ कति ? – Namaste Dainik
विदेशमा कोरोना का कारण १४ नेपालीको ज्यान गयो, दुई सय भन्दा बढी संक्रमण । कहाँ कति ?
April 17, 2020 NamastedainikLeaveaComment on विदेशमा कोरोना का कारण १४ नेपालीको ज्यान गयो, दुई सय भन्दा बढी संक्रमण । कहाँ कति ?
काठमाडौँ, वैशाख ५ – कोरोना भइरसबाट हालसम्म विदेशमा १४ जना नेपालीको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै विभिन्न मुलुकमा झन्डै दुई सय जना नेपाली नागरिक कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ।
त्यस्तै,श्रम गन्तव्यकै अर्को मुलुक कुबेतमा १२ जना नेपालीलाई कोरोना सङ्क्रमण रहेको छ । यूएईमा ११ जनालाई सङ्क्रमण छ । त्यहाँ नौ जना नेपाली क्वारेन्टाइनमा छन् भने दुई जना घर फर्केका छन् ।
त्यस्तै अस्ट्रेलियामा आठ जना नेपालीमा कोरोना सङ्क्रमणको पुष्टि भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । त्यहाँ थप सात जना नेपाली क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् ।
त्यसैगरी, स्पेनका आठ नेपाली पनि कोरोना सङ्क्रमणको चपेटामा परेका छन् । तीमध्ये केही उपचारपछि घर फर्केका छन् भने केहीको उपचार चलिरहेको छ । स्विटजरल्यान्डमा पाँच जना नेपालीमा कोरोना भाइरसको सङक्रमण देखिएको छ । अर्को प्रमुख श्रम गन्तव्य साउदी अरबमा चार नेपाली सङ्क्रमित छन् । त्यहाँ एक नेपाली उपचारपछि निको भएका छन्।